Version 0.4.0 – Integrations cusub Happy
January 1, 2010 by dalabyo 25 Comments
Tani version cusub bixisaa integrations leh labo kamid ah plugins wordpress ugu caansan. Marka koowaad waxa, google-ee hobyoradio-sitemaps helaysaa hab si ay u abuuraan sitemaps isticmaalo qalab by webmaster google iyo google, is dhexgalka abuurtaa for url kasta ee umada bahawdey dheeraad ah sitemaps for bogagga turjumay. -Dhexgalka Tani waxay u baahan tahay balastar fudud in lagu sameeyo on plugin asalka ah, akhriyo sida ee FAQ ah, ama nala soo xiriir si aad u hesho faylka u jecleystay. Waxaan rajaynaynaa in qoraalkii ka mustaqbalka ee google-ee hobyoradio-sitemaps ka mid noqon doona balastar this by default.
-Dhexgalka labaad waa kula Conciliation super-kayd kaas oo bixiya farsamo la isagu qudhiisu ka ah ee wordpress a, plugin tani ma aha, waayo waa taag ah oo wadnaha iyo bixisaa a farsamo la isagu qudhiisu ka xoog badan beddelkeeda ton oo dhibaatooyin on habka, rakibaadda waa adag iyo is-dhexgalka bulshada waa xitaa adag tahay. Si kastaba ha ahaatee, -dhexgalka this bixisaa this user plugin isbedel fudud kaas oo delete page ka cached kor tallaabo turjumaad, Taas waxay ka ilaalinaysaa tarjumadood ee ka soo dhacaya marar badan oo ka soo users si aad u aragto content ahayn turjumay (iyo in ay dhacdo auto-turjumaad, tarjumidda mar kale iyo mar kale).
Haddii aad qabtid plugins more aad rabto inaad is-dhexgalka leh, iyo aad fikrado ku saabsan sida loo (iyo laga yaabee code qaar ka mid ah), kaliya hoos u qoraal halkan. Markaasaa haa tahay – toban sano cusub faraxsan noo dhan si!
Update 2010/1/3 – Waxay u muuqataa waxaa jiray qalad kula tilmaamaha-daloola, fariimaha cusub waxaa la updated on qaybta site FAQ this (mahad myatus). Daawadan waxaa sidoo kale si toos ah lagala soo bixi karaa link this : sitemap-core-322-u jecleystay
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: google-ee hobyoradio-sitemaps, yaryar, sii daayo, plugin wordpress, Conciliation super-kayd